Translate Portuguese to Myanmar (Burmese) | Multilang.space
translate Portuguese to Myanmar (Burmese), Portuguese to Myanmar (Burmese) translations, Portuguese to Myanmar (Burmese) Google Translate ,
Oi como vai မင်္ဂလာပါ, နေကောင်းလား
Tem alguém? မည်သူမဆိုရှိပါသလား?
Eu te amo muito muito ငါသည်သင်တို့ကိုတကယ်အရမ်းချစ်ကြ
Quanto custa esse hambúrguer? ဒီဟမ်ဘာဂါဘယ်လောက်ကုန်ကျသလဲ,
Você pode me chamar de táxi? သငျသညျအကြှနျုပျကိုတက္ကစီခေါ်ခြင်းနိုင်သလား?
sinto muito ကျွန်တော်စိတ်မကောင်းပါဘူး
com licença တဆိတ်လောက်
estou interessado ငါစိတ်ဝင်စားဖြစ်ကြောင်းကို
O meu voo foi atrasado အကြှနျုပျ၏လေယာဉ်ခရီးစဉ်နှောင့်နှေးခဲ့သညျ
Estou aqui para negócios ငါစီးပွားရေးလုပ်ငန်းဒီမှာဖြစ်ကြောင်းကို
Olá meu nome é မင်္ဂလာပါ, ငါ၏နာမဖြစ်ပါသည်
Me desculpe, mas sou casada ငါစိတ်မကောင်းပါဘူး, ဒါပေမယ့်ငါလက်ထပ်ဖြစ်ကြောင်းကို
Eu gostaria de te perguntar ငါသည်သင်တို့ကိုမမေးချင်ပါတယ်
Você pode me levar para o aeroporto? သငျသညျလေဆိပ်ကိုငါ့ကိုယူနိုင်သလား?
Qual é o momento agora, por favor? ညာဘက်ယခုအချိန်ကိုအဘယျသို့ ကျေးဇူးပြု. ပါသလဲ
Onde éaestação de polícia mais próxima? အနီးဆုံးရဲစခန်းဘယ်မှာပါလဲ?
Posso emprestar seu carregador de telefone, por favor? ငါသည်သင်တို့၏ဖုန်းကို charger ကိုကျေးဇူးပြုပြီးချေးနိုင်သလား?
Pode me ajudar? ကျွန်တော့်ကိုကူညီပေးလို့ရမလား?
Peça-me uma bebida, por favor? ငါ့ကိုသောက်စရာအမိန့်, ကျေးဇူးပြု. ?
Quanto custa isso? ဒါဘယ်လောက်ကုန်ကျလဲ?
Eu sou alérgico ao glúten ငါ gluten မှမတည့်ဘူး
Por favor, chame um médico ဆရာဝန်ခေါ်ပါ
Existe um médico? ဆရာဝန်တစ်ဦးရှိပါသလော
Posso fazer uma ligação? ငါဖုန်းခေါ်ရနိုင်မလား?
Me ligue seu chefe, por favor. ငါ့ကိုသင့်ရဲ့သူဌေးကို ကျေးဇူးပြု. ခေါ်ဆိုပါ။
Este lugar é muito bom ဤအရပ်ဌာနကိုအလွန်ကောင်းတဲ့ဖြစ်ပါသည်
Leve-me para o hotel por favor ဟိုတယ်မှငါ့ကိုကျေးဇူးပြုပြီးယူပါ
Qual é o número do meu quarto? အခန်းထဲမှာအရေအတွက်ကဘာလဲ?